Ha na-eme ihe ?! | Martech Zone
Ha na-eme ihe ?!
Tuzdee, Machị 6, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Nke ahụ bụ isiokwu mara mma na ụlọ ọrụ anyị ma a bịa n'otú ndị ahịa anyị si eji sọftụwia anyị. Enwere ihe ndị mmepe ngwanrọ na-echefu maka ndị ahịa anyị n'ihi na enwere ọtụtụ mkpuchi dị n'etiti ndị na - ojiji koodu na folks na dee koodu.
Ndị mmepe sọftụwia na ndị ha na ha na - arụ ọrụ nwere ọgụgụ isi. Ide ederede ihe siri ike ma choro ikike nghọta, ezi uche na nsogbu nsogbu. Imirikiti ndị mmepe nwere ọgụgụ isi amaara m bụkwa ndị okike ma na-adịkarị ndụ na koodu ume. Ọzọ… smart ụmụ okorobịa.
Nke a bụ ihe echefuru mgbe ụfọdụ mgbe ị na - arụ ọrụ ọtụtụ ụkọ ụmụ okorobịa nwere ọgụgụ isi: ndị ahịa gị nwekwara ụmụ nwoke maara ihe. N'ezie, o nwere ike ịbụ na talent dị n'ụlọ ikpe ha dabara na nke gị. Ọ bụrụ na ị nwere ndị ahịa 5,000 - ị ga - ahụ ugboro puku ise na ndị ahịa gị karịa n’ụlọ ikpe nke gị. Nsogbu bụ, ha na-aga na mkpokọta mata niile nke gị ọma, workarounds, fọrọ, downtime, chinchi, emehie, ihe ọjọọ akwụkwọ, wdg E nweghị ụzọ mgbapụ ya.
"Ha na-eme ihe ?!" - ihe ijuanya na njedebe ajụjụ a kwesịrị ịbụ ihe ihere.
Ndị ahịa ga-ahụ ihe ịtụnanya ga-eme na ngwaahịa gị nke ị na-atụghị anya ya. Anaghị atụ anya. Dị ka ihe mwekota na akpaaka Ihọd, M mgbe niile tiwaa na a ọnụ ọchị mgbe m na-anụ banyere a ahịa na-eme ihe na anyị software na anyị na-atụghị anya. M mepụtara agbanwe tupu na adịghị asọpụrụ Chineke koodu na ngwa nke atọ. N'ihi gịnị? N'ihi na ọ na-arụ ọrụ.
Nke ahụ bụ aha egwuregwu… mee ka ọ rụọ ọrụ. Ndị ahịa anyị nwere usoro azụmaahịa ha na-eji sọftụwia anyị iji kwado. Enwere usoro azụmahịa na-enweghị njedebe; n'ihi nke a, enwere ọnụọgụ enweghi ngwụcha nke azịza eji akwado usoro ndị ahụ. Nke ahụ bụ nnukwu ihe. Companylọ ọrụ gị nwere nhọrọ mgbe ihe ndị a mere:
Kwupụta na ha anaghị akwado ha ma tụgharịa isi na ihe ndị ahịa gị kwesịrị ịga nke ọma.
Mepee ntị na anya gị, ma jiri nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa gị ka ịbanye ngwaahịa gị gaa na ụzọ ọhụụ.
Ọ bụrụ na ịhọrọ # 1, ọ dị mma. Asọmpi gị ga - ahọrọ # 2. Gaghị echegbu onwe gị maka onye ahịa ahụ ọzọ.
Ezigbo ihe ncheta. Ọ bụrụ na ịnwebeghị, ị kwesịrị igosi ụfọdụ ndị otu gị hormepụta Ndị Omi Omiiko.
Lot si dị ka uche ihe si Kathy na Dan.
Daalụ, Graydon! O doro anya na ndepụta ndị ọkacha mmasị m!
Ndụmọdụ a bụ eziokwu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
(Anyị ka mechara ihe nkiri nke gosipụtara onye bụbu praịm minista. Taa onye na-achọ ịzụ ahịa rụtụrụ aka, na enweghị ebe anyị kwurula n'eziokwu na ọ bụbu onye bụbu praịm minista. anyị echefuru kpamkpam na ọtụtụ ndị agaghị ama.)
Ndụ bụ ịmụ ihe mgbe niile. Na ihe ijuanya.
Isi ihe, Martin!
Douglas, Ahụrụ m ihe mmechi gị ebe a. Asọmpi gị ga-elekọta # 2!
Nke ahụ bụ eziokwu. Ga njem ọzọ ma na-ege onye ahịa ntị na-enwekarị mmeri ọ bụla n'ikpeazụ. Ma ọ bụ usoro mgbe niile.
Hụ isiokwu nke saịtị ahụ n'anya, BTW.
Daalụ, Amin! M ka na-esiri isi m ike… ọ bụ obere clunky ma enwebeghị m ike-abịa na ihe ọ bụla mma (ma).
Otu ihe achọpụtara m mgbe m na-eweghara ọrụ sọftụwia dị n'ime bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla na-egosi ebe ịmalite. Ọ bụrụ na edere ya nke ọma, enwere ike ịnwe akwụkwọ 20 mana ọ nweghị onye n'ime ha na-ekwu "GADỌ M MBIR!"
M na-emechi mgbe niile na-agbanwe mkpụrụ okwu / pdf docs na ederede ka m nwee ike tee.